KTLA5News စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၆၊ ဇွန် ၉၊ ကြာသပတေးနေ့
Here's Henry six days afteramassive tumor was surgically removed from his side. (Credit: KTLA)
Valerie Anne စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၆၊ ဇွန် ၃၊ သောကြာနေ့
"Henry" came to volunteer today at the OC Pet Expo and to meet all his fans !
Newport Beach Animal Shelter စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၇၊ ဧပြီ ၃၀၊ တနင်္ဂနွေနေ့
Newport Beach Animal Shelter စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၆၊ ဇူလိုင် ၃၊ တနင်္ဂနွေနေ့